Financial University eo ambany ny Governemanta ao amin'ny Federasiona Rosiana
fanafohezan-teny : Fu
mpianatra (eo ho eo.) : 80000
Aza adino ny discuss Financial University under the Government of the Russian Federation
Financial University malaza foana ho ny kalitaon'ny fampianarana izany matihanina nanome. Ho an'ny maro nahazo diplaoma ny am-polony taona no fototra sy ny vato nasondrotry ny firenena ara-bola sy ara-toekarena rafitra. Anisan'izany ny fitantanam-bola sy ny minisitra lefitry ny fitantanam-bola ny URSS mpanao fanompoam-pivavahana sy ny Rosia, mpanao politika, manam-pahaizana, mpandraharaha, filoham-pirenena sy ny banky ara-barotra, indostria sy ara-bola ny orinasa, rectors ny lehibe oniversite avy any ivelany.
Ny fahombiazana sy ny zava-bita tsara indrindra no porofo ny amin'ny ara-bola ny fahefan'i University, kalitao sy mifaninana ny fandaharana ny fampiofanana.
Ny vondrona ao amin'ny Akademia Alumni nitarika ny fanapahan-kevitra ny hanangana ny fanafiana masina tahirim-bola rehetra ny vola mba ho ampiasaina mba hamatsiana ny andrim-panjakana fandaharana fampandrosoana, mba hanatsarana ny trano, zava-baovao isan-karazany manatanteraka tetikasa, hanatsara ny kalitaon'ny fampianarana, sy ny sisa.
Ny Filohan'ny Fund ny fanafiana masina ny Filankevi-pitantanan'ny dia A.L. Kudrin, Lefitra ny Praiminisitra sy ny Minisitry ny Fitantanam-bola ao amin'ny Federasiona Rosiana.
Ankehitriny ny Financial University no lehibe indrindra fampianarana sy ny fikarohana manahirana, iray amin'ireo mpitarika Rosia fianarana sy fikarohana foibe tany an-tsaha ny ara-bola, bola, fitantanana ara-bola, fiantohana, hetra sy ny hetra, ampamoaka, fanadihadiana sy ny fanaraha-maso, fifandraisana ara-toekarena iraisam-pirenena, mety famakafakana, krizy fitantanana, matematika fomba in toekarena, bahoaka sy ny monisipaly fitantanana, ny lalàna sy ny ara-politika siansa.
Ny University ara-bola ahitana ny tambajotra ny faritra manontolo sampana - mpiray sy ny solontenan'ny birao ary koa ny fitantanam-bola sy ny toekarena kolejy. Ny isan-taona ny isan'ny mpianatra tao amin'ny Oniversiten'i dia mihoatra noho ny 30 arivo, amin'ny am-polony mandray an'arivony manam-pahaizana manokana matihanina taranja fampandrosoana.
Mba ho foana ao amin'ny loha laharana, tsy mba hihaona amin'ny zava-tsarotra ny fotoana, fa koa mba hamaritana ny antso ny fotoana - izany no fahitana ny fahombiazana. Ny fandaharam-pianarana ho indrindra ny zava-bita ny maoderina-pirenena sy ny avy any ivelany ny siansa ara-toekarena, ary ny farany dia be pampianarana teknolojia ampiharina ao amin'ny akademika dingana. Miasa izahay hanatsara ny rafitra ny fianarana mandritra ny fiainana ao anatin'izany ny anjerimanontolo mialoha fampiofanana manokana ho an'ny mpianatra, fiofanana ho an'ny manam-pahaizana manokana amin'ny fanabeazana ambaratonga faharoa arak'asa, anjerimanontolo undergraduate mari-pahaizana licence sy mari-pahaizana maîtrise fandaharan'asa), , nahazo diplaoma teny fanabeazana (PhD ary doctorat fampianarana), faharoa matihanina ambony fampianarana (isan-karazany sy ny matihanina retraining fandaharanasa fampandrosoana ho an'ny manam-pahaizana manokana), raharaham-barotra fandaharana fanabeazana.
Azo ampiharina fironana ny fanabeazana no zava-dehibe indrindra ho an'ny mpahay toekarena amin'izao fotoana izao. Izany no mahatonga ny University dia manindry ny fanaovana za-draharaha ratsy, ao ny fahafahana ny mpampianatra. Lohan'ny banky, fiantohana sy ny fanaraha-maso ny orinasa ary koa ny lehibe sy ny orinasa ara-bola rafitra miasa miaraka amin'ny mpianatra.
Provides training in Economics with qualification (diplaoma) Bachelor of Economics, major Finance and Crediting
Provides training in Management with qualification (diplaoma) Bachelor of Management, major Financial Management
Management with qualification (diplaoma) Bachelor of Management,
major State and Municipal Governance, Fitantanana tetik'asa
Applied Mathematics and IT Technologies with qualification (diplaoma) Bachelor of Applied Mathematics and Informatics, major Financial Analyst
Applied Informatics with qualification (diplaoma) Bachelor of Applied Informatics, major Mathematical and Information Support of Economic Activities
Provides training in Economics with qualification (diplaoma) Bachelor of Economics, major Taxes and Taxation
Faculty ny Accounting sy ny fanamarinana
Provides training in Economics with qualification (diplaoma) Bachelor of Economics, major Accounting, Analysis and Audit
Provides training in Economics with qualification (diplaoma) Bachelor of Economics, major World Economy
Faculty ny Lalàna more
Law with qualification (diplaoma) Bachelor of Law, major Public Law, and the possibility to do Master’s with qualification (diplaoma) Master of Law
Political Science with qualification (diplaoma) Bachelor of Political Science, major Political Science, and the possibility to do Master’s with qualification (diplaoma) Master of Political Science
Provides training in Economics with qualification (diplaoma)
(Bachelor of Economics), major World Economy, and the possibility to do Master’s with qualification (diplaoma) Master of Economics
7. “Civil Lalàna”
22. “Applied Matematika”
39. “Criminal Lalàna”
47. Higher Sekoly of Public Administration: “Public Service”
48. Institute ny Business Administration ary Business “Innovative Management”
49. International Sekoly of Business “Innovative Business”
54. “Taranja fanatanjahan-tena”
1992 – the Finance Academy under the Government of the Federasiona Rosiana
satria 14.07.2010 – the Financial University under the Government of the Russian Federation
Ianao ve mila discuss Financial University under the Government of the Russian Federation ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra